အမွနျလမျး ၁၆၅ မိုငျ ဆှာခြောငျးတံတား ကြိုးသှားပွီဆိုတဲ့သတငျးမှား – Think Before You TRUST
Home>>Uncategorized>>အမွနျလမျး ၁၆၅ မိုငျ ဆှာခြောငျးတံတား ကြိုးသှားပွီဆိုတဲ့သတငျးမှား
တှေးပွီးမှယုံJuly 26, 2019
အမွနျလမျး ၁၆၅ မိုငျ ဆှာခြောငျးတံတား ကြိုးသှားပွီဆိုတဲ့သတငျးမှားနဲ့ ပတျသကျပွီး သတငျးမှားတှထှေကျရှိနတေဲ့အပျေါ အမွနျလမျးမကွီး ရဲတပျဖှဲ့မှူးရုံး ဖဘှေ့တျပခြေျ့ကနေ တငျထားတာကို ပွနျလညျကူးယူဖျောပွ ပေးလိုကျပါတယျနျော။
အမြန်လမ်းမကြီးတစ်လျောက်. ခရီးသွားလာနေသည့် ပြည်သူများ အတွက်. အမြန်လမ်းမတွင်ဖြစ်ပွားသည့် ထူးခြားဖြစ်စဉ် နှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ ဖြစ်စဉ်များကို. သိရှိစေရန်. အမြန်လမ်းမကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ မှူးရုံးမှ အချိန်တပြေးညီ ထုတ်ပြန် အသိပေးလျက်ရှိပါသည်
သို့ ရာတွင်. ပြည်သူများ အထိတ်တလန့် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေရန်. လူ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ချို့ မှ. သတင်း အမှားများလုပ်ကြံ ဖော်ပြလျက်ရှိရာ. ယနေ့ဇူလိုင်လ(၂၆) ရက် ညနေ တွင် လူမှုကွန်ယက် ၌ ဆွာချောင်းတံတား ၁၆၅ မိုင် ကျိုးကြောင်း. ဖော်ပြလျက်ရှိပါသည်
အဆိုပါ သတင်းသည်. မှန်ကန်မှု မရှိကြောင်းနှင့်ပြည်သူများ စိုးရိမ် ထိတ်လန့် မှု မဖြစ်စေရန်. အသိပေးအပ်ပါသည်
( ယမန်နှစ် ဖြစ်စဉ်. ၂၀၁၈ ခုနှစ်သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်ကို ပြန်လည်ဖော်ပြခြင်း မဟုတ်ပါ)
သတငျးတု၊ သတငျးမှားတှဒေဏျခံနရေတဲ့ ဟောငျကောငျ
တရားခံအဖွဈ သတျမှတျခံနရေတဲ့ ကားဆရာ ဆိုတဲ့ သတငျးဓါတျပုံ အတု